Iprofayile yeNkampani-iShenzhen Lightman Optoelectronics Co, Ltd.
Shenzhen Lightman Optoelectronics Co, Ltd.
Shenzhen Lightman Optoelectronics Co, Ltd. lishishini eliphakamileyo eliphantsi korhulumente elinezixhobo eziphezulu zokukhanyisa ukukhanya ze-LED kunye namaziko ovavanyo. Ngo-2012, i-Lightman imisela umzi-mveliso we-OEM "I-LED Panel Lighting Co, Ltd." loo nto yenza i-OEM i-odolo yeenkampani zokukhanyisa ekhaya nakwamanye amazwe. Inkampani ibonelela ngetekhnoloji yokukhanyisela ipaneli ye-LED kwaye inikezela ngomgca obanzi wezisombululo zepaneli ye-LED.
Sakha iqela le-R&D elomeleleyo elibunjwe ngushushu, ngamehlo, ziingcali zombane ngamava atyebileyo kuphando lwetekhnoloji, ukuvelisa, ukuphatha njl njl. Abasebenzi abaqeqeshiweyo baqinisekisa ukuba iimveliso zethu zikumgangatho ofanelekileyo oqinisekisiweyo. Ukuthengisa ngobuchule kulandele abathengi bethu ngalo naliphi na ixesha. Umgca wokuzenzekelayo wokuvelisa umgca, izixhobo zeefotoctric, izixhobo zokupakisha ze-ASM kunye nesixhobo sokuvavanya, zisenza sikwazi ukubonelela ngomgangatho ophezulu, uzinzo oluphezulu kunye neemveliso ezifanelekileyo.
Sakha intsebenzo ngezinto ezininzi eziluluhlaza kunye nabathengisi bezinto elizweni, ezinjenge MITSUBISHI, SAMSUNG, EPISTAR, CREE, BRIDGELUX, ATMEL, PHLIPIS, OSRAM, KWISEMICONDUCTOR, MEANWELL njl.
Uninzi lweemveliso zethu ezikhanyayo zeepaneli zohambo zifumana i-UL, CUL, DLC, CE, ROHS, FCC, TUV, GS, SAA kunye nezatifikethi ze-EMC, kwaye zithunyelwa kakhulu eYurophu, eNyakatho Melika, eJapan, e-Australia, eMzantsi Melika, kumazwe ase-Asia nakwimimandla . Ngomgangatho kunye nenkonzo elungileyo, sifumana ukuthembela okukhulu kunye nokudumisa kubathengi bethu basekhaya nabaphesheya kwaye sakhe umfanekiso ochanekileyo weshishini kunye nodumo kushishino lwezibane ze-LED.
Apha ngezantsi kukho uthutho lomnatha wentengiso wehlabathi: